January | 2015 | linyeikhtin
ဆရာမ-ဟုတ်ပြီ။ နောက်လေးခုပြော။ မြန်မြန်။
This entry was posted in ဟာသ on January 29, 2015 by linyeikhtin.
ဒါပေမယ့် ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံး တုန်ဟည်းခဲ့တယ်။
တစ်ချက်ချက်နဲ့ မည်နေတဲ့ သွေးပန့်ကြီးက
“အို…အသင်လောက အသင်၏ စွမ်းအားများနှင့်
အချိန်ယန္တရားအား ခေတ္တမျှ အေးခဲစေလှည့်ပါ။”
ဒီစကားကြားတော့ နေနဲ့လက မျက်နှာမဲ့ပြတယ်။
ဒီဂန္တဝင်ကဗျာကို ငါရဲရဲဝံ့ဝံ့ ထုဆစ်ခဲ့တယ်။
This entry was posted in ကဗျာ on January 6, 2015 by linyeikhtin.
ငှက်ရိုးတစ်ယောက် ဈေးဝယ်ထွက်သည်။တစ်ယောက်တည်းတော့မဟုတ်…။ငှက်ရိုးရဲ့မမ “မမကြက်ရိုး”နှင့် ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်ဆို ငှက်ရိုးက ဈေးမဝယ်။ ဝယ်လျှင်လည်း ရှော့ပင်းစင်တာများတွင်သာဝယ်သည်။
ခုတော့ ငှက်ရိုးမမက သူ့ကိုဈေးခြင်းတောင်းမပေးမည့်သူမရှိ၍ ငှက်ရိုးကိုချောဆွဲလာခြင်း ဖြစ်သည်။
ခုရှုပ်မှနောင်ရှင်းမှာမို့ ငှက်ရိုးကတော့ ကြိုသတိပေးထားသည်။ဈေးခြင်းတောင်းကတော့ ဆွဲပေးမည်။သူလင်နောက်လိုက်လျှင်တော့ “ထမီထုပ်”ကူမဆွဲပေးနိုင် ဟူသတတ်။
ဤသို့ဖြင့် ဈေးထဲသို့ရောက်လာသည်။ငှက်ရိုးတစ်ချက်ဝေ့ကြည့်လိုက်သည်။ခေါင်းအတော် မူးသွားသည်။
မနက်ခုနှစ်နာရီသာ ရှိသေးတာမို့ ဈေးဝယ်သူများကတော့ ကျဲပါးနေသည်။(ဒီလောက် လူနည်းတာတောင် ငှက်ရိုးခေါင်းမူးနေတယ်ဆိုတော့ ဒီထက်သာလူများလာလျှင် ငှက်ရိုးတစ်ယောက် ဦးမင်းကျော်နှင့်နင်လားငါလားဖြစ်သွားနိုင်သည်။)
ထိုဈေးဝယ်သူနည်းနည်းလေးကိုပင် ဈေးသည်များက ဆွဲတော့လွဲတော့မတတ် အပြိုင် အဆိုင်ဈေးခေါ်နေကြသည်။ဥပမာပြောရလျှင် အမဲသားကြီးတစ်တုံးကို ကျီးကန်းများက ဝိုင်းပြီးလုနေ ကြသည့်မြင်ကွင်းနှင့် ခပ်ဆင်ဆင်တူသည်။
တချို့ဈေးသည်များကတော့ စပယ်ယာဘဝက စုတေလာသူများလားမသိ။ဈေးရောင်းတာ ကိုပင် မှတ်တိုင်အော်သလို တကြော်ကြော်ရွတ်နေသည်။
“ဘူးသီး၊ခရမ်းသီး၊ဂေါ်ရခါးသီး၊ကြက်ဟင်းခါးသီး၊သခွားသီး လာဟေ့………။ရမယ် ရမယ်။ ဝယ်ရင်လာ ဝယ်ရင်လာ။”
မဆိုးတော့ မဆိုး။ဆိုင်ပေါ်တွင် မတ်တပ်ရပ်၍တသွယ်၊ဆိုင်ရှေ့တွင် ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန် လမ်းလျှောက်၍တမျိုး ဈေးခေါ်သည့်ပုံစံက သူများတွေလို လုစရာမလိုပဲ ဖောက်သည်အတော်ရသည်။ မတော်တဆအရင်းပြုတ်သွားလျှင်တောင် စပယ်ယာဝင်လုပ်၍ရသည်။ထမင်းငတ်မှာတော့ မပူရ။
မဖြစ်တော့ မဖြစ်တော့။ငှက်ရိုးခေါင်းတွေ အတော်မူးလာသည်။ဒီတော့ ဝယ်စရာရှိတာ မြန်မြန်ဝယ်ပြီး အိမ်ပြန်ရမည်။
“မမ…ဟိုမှာ ကြက်သားသည်။ကျွန်တော်တို့ ကြက်သားဝယ်ရမယ်လေ။”
မမ တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ပြီးတော့ ခေါင်းခါသည်။
“နင့်ရဲ့ကြက်သားက ရေထိုးထားမှန်းသိသာတယ်။ဖြူဖျော့ဖျော့ပွစိစိကြီး။ဗမာကြက်ထဲမှာ အဲဒီလောက်ကြီးတဲ့ကြက်မျိုး နင်တွေ့ဖူးလို့လား။”
မမပြောတာဟုတ်လောက်သည်။ ကြက်သားက မမပြောသလိုမျိုး ပွစိစိကြီး။
ပွစိစိဆိုမှ သတိရသည်။ ငှက်ရိုးသူငယ်ချင်းထဲတွင် ချမ်းချမ်းကိုဒေါင်လိုက်တစ်ခြမ်းခြမ်း ထားသော ဘော်ဒီရှိတ်နှင့် ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိသည်။
အသားကလည်း မီးသွေးကိုကတ္တရာစေးသုတ်ပြီး မင်အိုးထဲ၃နှစ်လောက် ထည့်စိမ်ထား သလောက်လေးသာညိုသော အသားအရေပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။
အောင်မာ။မိတ်ကပ်လေးနည်းနည်းပြင်ပြီး သစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်မှာသာတင်ထား။UFOပေါ်က ပြုတ်ကျလာတဲ့ETပဲ။ဒီအတိုင်းကြည့်ရင်းနဲ့တောင် ၇ရက်လောက်အော်ဂလီဆန်နိုင်တဲ့ မျက်နှာပိုင်ရှင်။ နဖူးကပြောင်ပြောင်၊ အရပ်ကငေါက်တက်တက်ကလေး၊ နှလုံးအားမကောင်းလို့ ရင်ဘတ်မှာစက်တပ် ထားရတာကိုတောင်အားမနာ တစ်ခါတစ်ခါမုန့်ဟင်းခါးက ထထရောင်းချင်သေးသည်။
ဒါကထား…။အဲဒီတစ်ယောက်က ငှက်ရိုးကိုတွေ့တိုင်း ပြောလေ့ရှိသည့် စကားတစ်ခွန်း ရှိသည်။သူမသေခင် တိုက်ဖွိုက်ဖြစ်နေသော တီဘီရောဂါသည်လောက်တော့ ဝချင်သေးသည်ဆိုသည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။
ငှက်ရိုးခင်သော သူငယ်ချင်းမို့ တတ်အားသမျှကူညီပေးချင်သည်။သူ့ကို တစ်နေ့လျှင် ရေ၃စီစီလောက် ထိုးပေးမည်။ကြက်တောင်ပွသည်ဆိုလျှင် လူလည်းဝလာနိုင်သည်။
ဒီတစ်ယောက်လောက် ကြက်ကန်းတိုးပြီးအဆင်ပြေသွားလျှင်MBBSဆိုင်းဘုတ်ချိတ်မည်။ စေတစ်လုံးပိုင်ရှင်”ဝစေဆရာ ပရော်ဖက်ဆာဒေါက်တာငှက်ရိုး”။
ကဲ…ဘယ်လောက်နားထောင်လို့ ကောင်းလိုက်တဲ့နာမည်လဲ။ကုတဲ့ရောဂါတွေ မပျောက် တော့ရင်လည်း ကိစ္စမရှိ။အစပိုင်းသာ နာမည်ကောင်းရဖို့လိုသည်။နောက်ပိုင်းကတော့ ရှေ့က နာမည် ကောင်းနှင့် လုပ်စားရုံသာ။
အတွေးကအတော်လွန်သွားသည်။မမလည်းလက်ညှိုးနှင့် တို့ပြော၍မရသဖြင့် တံတောင် နှင့် ထောင်းလိုက်ပုံရသည်။ထိုတော့မှ စိတ်ကပြန်လည်လာသည်။
တံတောင်နှင့်ထောင်းတာခံလိုက်ရသဖြင့် သွေးရူးသွေးတန်းထမေးသည်။(သြော်…မာဆတ် သွားနေကျ အကျင့်လေးတွေ။)
အလေ့အကျင့်ရှိသူမို့ ထွေထွေထူးထူးစဉ်းစားမနေ လုပ်နေကျအတိုင်း ယောင်ယမ်းပြီး ဖိနပ်ကို လက်မှာကောက်စွပ်လိုက်သည်။ဈေးခြင်းတောင်းလွတ်ကျသွားသည်။ဖိနပ်ကို ကုန်းပြီးယူလိုက် သဖြင့် အနောက်ကအန်တီကြီးတင်ပါးကို ငှက်ရိုး၏တင်ပါးက သွားမိတ်ဆက်သည်။
အန်တီကြီးကလည်း ကြောက်အားလန့်အားဖြင့် သူ့ပေါင်၁၇၀ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနှင့်မမျှအောင် ပင် ဘေးနားက ကုလားဒိန်အကိုကြီး၏လည်တိုင်ကို ယီးလေးခိုလိုက်သည်။ ထိုအကိုကြီးကလည်း မနိုင်၍လား၊တမင်တကာပဲလားမသိ လွှတ်ချလိုက်သည်။
“အောင်မလေးဗျ”ဟူသည့် အသံအဆုံးတွင် အနှစ်နှစ်အလလကပိုးမွေးသလိုမွေးခဲ့ရသည့် ထိုအကိုကြီး၏ မုတ်ဆိတ်မွှေးများက ပေါင်၁၇၀အန်တီကြီး လက်ထဲတွင် ကားယားကားယားနှင့် ပါလာကြသည်။
မမျှော်လင့်သော အခြေအနေမို့ ငှက်ရိုးလည်း အနောက်ကိုလှည့်ပြီး ကပျာကယာ တောင်းပန်လိုက်သည်။ ခြေထောက်၌ပါသောမျက်စိက အသုံးမကျ။ ငှက်ရိုးခြေထောက်တစ်ချောင်းလုံး ဘေးက ခေါင်းရွက်ဗျပ်ထိုးဈေးသည်ကြီး၏ သံပုရာသီးဗန်းထဲသို့ဝင်သွားသည်။
ခဏလေးအတွင်း၌ပင် ဈေးအတွင်း၌ အော်သံများ၊ညည်းငြူသံများ၊အာမေဋိတ်သံများ၊ တောင်းပန်သံများနှင့် ဆူညံသွားသည်။
သိပ်မကြာလိုက်။ဈေးကောက်များ၊မီးသတ်များ၊စည်ပင်များနှင့်စွမ်းအားရှင်လိုလိုလူမိုက်များ ငှက်ရိုးတို့နားသို့ရောက်လာသည်။သူတို့လည်း ဈေးအတွင်း ဆန္ဒပြနေသည် အောက်မေ့၍လားမသိ။ အမောတကောနှင့်ရောက်လာကြသည်။တချို့လက်ထဲမှာဆို ဝါးရင်းတုတ်တွေတောင်ပါသေး။
မနက်စောစောမှာပင် အတော့်ကိုအာညောင်းသွားသည်။ပါးရိုက်မခံရစေရန် ရောက်လာသူ အကုန်လုံးကို အထင်လွဲမှုသက်သက်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ကြောင်း ရှင်းပြလိုက်ရ၍ ဖြစ်သည်။
ဤသို့ဤနှယ် စည်ကားပြီးသကာလ မမနှင့်ငှက်ရိုးတို့ ကြက်ရှာပုံတော် ထွက်ကြ ပြန်သည်။
“နင့်ကိုငါတံတောင်နဲ့ထောင်းလိုက်တာ အဲဒီလောက်ထိ ဖြစ်သွားမယ်မှန်းမသိခဲ့ဘူးဟယ်။”
“ဒါနဲ့ နေပါဦး။မမက ကျွန်တော့်ကို ဘာလို့တံတောင်နဲ့ထောင်းတာလဲ။”
“နင့်ကိုငါက အသား၊ငါးဝယ်ရင် ချိန်ခွင်ကိုလက်နဲ့ကိုင်ထားတဲ့ ဈေးသည်ဆီမှာ မဝယ်ဖို့ ပြောမလို့ဟေ့။”
“ဈေးသည်တွေက ချိန်ခွင်ကိုလက်နဲ့ကိုင်ထားရင် ချိန်ခွင်လျှာကို ထွက်စေချင်တဲ့ဖက် ထွက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်လေ။အဲဒီတော့ အလေးချိန်ဘယ်မှန်တော့မလဲ။”
မောင်ငှက်ရိုးခေါင်းနည်းနည်း ထပ်နောက်သွားသည်။တစ်သက်နှင့်တစ်ကိုယ် ချိန်ခွင်ကို ဒီလိုလုပ်လို့ရသည်ဟု ပထမဆုံးကြားဖူးလိုက်၍ဖြစ်သည်။မဆီမဆိုင် တရားသူကြီးများကိုပင် သတိရ လိုက်သေးသည်။
သို့နှင့် နောက်တစ်ဆိုင်……။ကြက်သားက ရေထိုးထားဟန်မတူ။အကောင်ကသေးသည်။ ချိန်ခွင်ကလည်း လက်နှင့်ကိုင်မထား ဆိုင်တိုင်တွင်ချိတ်ထားသည်။
ထို့နောက် ဆိုင်ထဲသို့ လှမ်းဝင်လိုက်သည်။
ငှက်ရိုးအတော်ပျော်သွားသည်။ ဈေးတောင်မေးနေပြီဆိုတော့ ဤဆိုင်တွင်ဝယ်ဖြစ်ဖို့က သေချာသလောက်ရှိနေပြီ။
သို့သော် အပျော်တို့က ကြာရှည်မခံ။ မမက မျက်ရိပ်ပြပြီး ဆိုင်ထဲမှထွက်သွားသည်။ ခပ်ဝေးဝေးရောက်တော့မှ ဘာကြောင့်ဆိုတာရှင်းပြသည်။
“အလေးတွေက ပါးလွှာနေတာပဲဟ။နင်ဝါသနာပါရင် Origamiခေါက်လို့တောင်ရတယ်။”
ငှက်ရိုး အတော်စိတ်လေသွားသည်။Origamiတောင် ခေါက်လို့ရနေသည့်အလေးဆိုတော့ (အင်း…အတော့်ကို ထူပေလိမ့်မည်။)
နောက်ဆုံးတော့ မမဝယ်နေကျဆိုင်ဖြစ်သည့် ဈေးအတွင်းပိုင်းသို့ပင်ဝင်၍ ဝယ်ခဲ့ရသည်။ မောတာကတော့မပြောနှင့်။ဆန္ဒပြသူများကိုတောင်မှ ရဲကိုကိုတို့က စေတနာဗလပွထားကာ တချို့ကို မီးသတ်ပိုက်နှင့်ဖြန်းပေးခြင်း၊တချို့ကို ရဲစခန်းတည်းဟူသော အရိပ်အာဝါသအောက်သို့ခေါ်သွားခြင်း စသည့် အပြုအမူများနှင့် အပူဒဏ်သက်သာအောင် ပြုစုပေးသေးသည်။
မောင်ငှက်ရိုးတို့ကတော့ ဈေးထဲမှာဖြစ်နေ၍ ထီးကလည်းဆောင်းလို့မရ။နေကလည်းပူ။ ဘူဒိုဇာလက်ချက်မိထားသည့် ကျူးကျော်များပမာ……။
သို့နှင့် ဝယ်ရန်ကျန်သေးသည့် ကန်စွန်းရွက်ထပ်ဝယ်ကြပြန်သည်။
ကျသင့်ငွေရှင်းပြီး ဆိုင်ထဲမှပြန်ထွက်မည်အလုပ်…။မမက လက်ကိုအသာကုတ်သည်။
မမက ကျွန်တော်မမြင်ရမှာစိုးသည့်အလား ကြည့်ခိုင်းသည်။
ဒါမျိုးဆို ငှက်ရိုးတို့က အလွတ်မခံ။လူကနေသည် ပညာကမနေ။ကန်စွန်းရွက်ဆိုင်ထဲ ရောက်ရောက်ချင်း ဟိုဖက်ဆိုင်က ဈေးသည်ကောင်မလေးဆီ အကြည့်က ရောက်ပြီးသား။မျက်လုံးကို က ခရိုနီမျက်လုံး။ဘယ်နေရာအချောင်နှိုက်ရမလဲဆိုတာပဲ ချောင်းနေတာ။(ဝါသနာ ဘယ်လောက်ကြီး လဲဆို ကန်စွန်းရွက်ငါးစည်းဖိုး ၁၀၀၀ပေးရမှာကို ၁၅၀၀ထုတ်ထုတ်ပေးနေတာသာကြည့်။)
“မမ မကြည့်ခိုင်းခင်ကတည်းက ကြည့်ပြီးသွားပြီမမရဲ့။”
“သြော် နင်က ငါမပြောခင်ကတည်းက တွေ့ပြီးပြီပေါ့။ငါ့မောင်လေးကလျင်လိုက်တာ။”
“သြော်…မမရယ် ဈေးသည်ပဲ ဈေးရောင်းနေတာပေါ့ဗျ။”
“အင်းလေ မြင်တယ်လေ။မြင်လို့ပဲ အဲဒီကောင်မလေး အကြောင်းပြန်ပြောနေတာပေါ့။”
“သေလိုက်ပါတော့ မီးတောက်နှာခေါင်းရယ် ငါက အဲဒီကောင်မလေး အဝတ်တစ်ခုနဲ့ အရွက်တွေ ရေလိုက်ဆွတ်နေကိုပြတာဟဲ့။”
“ဟုတ်လား။သိပါဘူး။ကျွန်တော်က အဲဒီကောင်မလေးကိုပြတာထင်လို့။စိတ်ထဲမှာတောင် စဉ်းစားမိသေးတယ်။ကောင်မလေးချောချောကို လိုက်ငမ်းနေတယ်ဆိုတော့ မမကLesbianကြီးလား…”
စကားပင်မဆုံးလိုက် မမလက်ဆစ်က ကျွန်တော်မောင်ငှက်ရိုးခေါင်းပေါ်ရောက်လာသည်။
လက်ဆကလည်း အတော်ပြင်းသည်။တစ်ခေါက်ဆို ဆိုသလောက်ပင်။မျက်ရည်တွေဝိုင်း နှပ်တွေပါ ထွက်ချင်လာသည်။ဒီဖက်ခေတ်က စစ်ကြောရေးဆိုတာတွေ မရှိလို့တော်တော့သည်။အဲဒီ စစ်ကြောရေးတွေသာရှိသေးလျှင် မမကို လာခေါ်နိုင်သည်။
မမကိုသာခေါ်သွား။ လူတစ်ယောက်ကိုနှိပ်စက်ရန် ကိရိယာတန်ဆာပလာမလို။တော်ရုံလူ လောက်ကတော့ မမကခေါင်းငါးချက်လောက် ခေါက်တာနဲ့တင် သွက်ချာပါဒလိုက်ပြီး လေငန်းပါ တစ်ခါတည်း ဆွဲသွားနိုင်သည်။အဲဒီလောက်ထိ ခေါင်းခေါက်ပညာကျွမ်းပုံ။
အခုလည်း ပင်ပေါင်ဘောလုံးတစ်လုံးနီးပါးထွက်လာသော ဘုကြီးကို အုပ်ကိုင်ရင်း မမကို မေးရသည်။
“မမ ဆက်ပြောပါဦး။အဲဒီ ရေစွတ်တာကဘာဖြစ်လဲ။”
“ဘာမှမဟုတ်ဘူး။အဲဒီရေတွေက ဓာတ်မြေသြဇာရေတွေလား မသိဘူးလို့ ပြောမလို့။”
“ဓာတ်မြေသြဇာရေနဲ့ ဘာလို့ဆွတ်တာလဲဟင်။ဆွတ်မယ့်ဆွတ် ပိုးသတ်ဆေးနဲ့ဆွတ်ရမှာ ပေါ့။အပင်တွေမှာ ဘတ်တီးရိးယားတွေရှိနေရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။”
“သြော်……ဦးနှောက်ရယ်။ကဲ ကဲ ငါပြောပြမယ်နားထောင်။”
“အရွက်တွေဆိုတာ ကြာလာရင်ညှိုးတတ်တယ်လေ။အဲဒီလိုညှိုးသွားတဲ့ အရွက်တွေကို ပြန်လန်းအောင်လုပ်တာ။”
မမက စိတ်ပါလက်ပါနှင့် ရှင်းပြနေသည်။ငှက်ရိုးကတော့ နားထောင်ရုံသာ။
“နည်းကတော့ရိုးတယ်ဟ။ဓာတ်မြေသြဇာတစ်မျိုးရှိတယ်။အဲဒီ ဓာတ်မြေသြဇာမှုန့်ကို ရေနဲ့ ဖျော်။အဲဒီရေထဲကို အဝတ်စတစ်ခုထည့်စိမ်။ပြီးရင် ရေညှစ်။အဲဒီအဝတ်စကို ညှိုးနေတဲ့ အရွက်တွေပေါ် တစ်ညအုပ်ထား။မနက်လင်းရင် နင့်အရွက်တွေပြန်လန်းပြီ။”
ငှက်ရိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်း သဘောပေါက်သွားသည်။စီးပွားရေးလုပ်ကွက်ကြီး တစ်ခုကိုလဲ တွေ့သွားသည်။
အရွက်တွေကိုပြန်လန်းအောင် လုပ်တာဆိုတော့ ဂန္ဓမာပန်းတို့၊ သစ္စာပန်းတို့ကိုလည်း ထို နည်းသုံးလို့ရမည်ထင်သည်။
မမပြောသွားသည့် နည်းကမဆိုး။ဘာမှလည်း အလုပ်မရှုပ်။ထိုဆေးနည်းအတွက် အဝတ် နှင့် ဓာတ်မြေသြဇာသာလိုသည်။မမကို ပြန်မေးပြီး သေသေချာချာ စမ်းသပ်ရမည်။
အောင်မြင်ပါက TVတွင်ကြော်ငြာထည့်မည်။ကြော်ငြာရာတွင် ပြောရမည့် ဒိုင်ယာလော့ခ်၊ ရိုက်ကွင်းအပြင်အဆင်နှင့် ဆောင်ပုဒ်တွေတောင် ခုကတည်းက စဉ်းစားပြီးသွားချေပြီ။
ကြော်ငြာမင်းသားက ကျယ်ပြောလှသော ပန်းခင်းကြီးထဲ အေးအေးလူလူ လမ်းလျှောက် လာရင်း အင်မတန်မှ ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားသည့် အသံနှင့်ပြောမည်။
“ပန်းတွေညှိုးလို့ စိတ်ဓာတ်ကျနေပါသလား။ ပရော်ဖက်ဆာဒေါက်တာငှက်ရိုးရဲ့ အံ့မခန်း ဆေးအဝတ်နဲ့သာအုပ်လိုက်ပါ။မနက်လင်းတာနဲ့ သင့်ရဲ့ပန်း လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်နေတာတွေ့ရမှာပါ။ ပန်းတွေလန်းဖို့ ငှက်ရိုးဆေးအဝတ်နဲ့ အချိန်တစ်ညပဲလိုတယ်နော့……။ငှဲ ငှဲ ငှဲ။”
နေကအတော်ကိုပူသည်။ ထီးဆောင်းထားတာတောင် နေအရှိန်နှင့် နဖူးတွင် ချွေးတို့က တဒီးဒီး။
ထို့ကြောင့် ငှက်ရိုး ကုသိုလ်များများလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ လူ့ပြည်မှာတောင် ဒီလောက်ပူရင် ငရဲတွင်ဒီထက်ပိုပူနိုင်သည်။
ငရဲအကြောင်းစဉ်းစားမိတော့ ဈေးထဲမှ မြင်ကွင်းများက မျက်လုံးထဲတွင်ပြန်မြင်ယောင် လာသည်။ အားရပါးရ အလေးခိုးနေကြသည့် ဈေးသည်တို့၏ပုံများဖြစ်၏။
မလွယ် မလွယ်…။ခေတ်ကိုက မခိုးတတ်လျှင် လူရာမဝင်သောခေတ်ဖြစ်နေသည်။ ငှက်ရိုးတို့ဘေးအိမ်က ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ရှင်းသည်။ သူဘုရားရှိခိုးလျှင် ဘယ်တော့မှ အဒိန္နဒါနနဲ့ မုသာဝါဒကိုထည့်မဆို။ လူကြီးလုပ်ရတာမဟုတ်လား။ ဒီလောက်ကတော့ ဖြစ်သင့်သည်။
ဘာပဲပြောပြော (သူများခိုးတိုင်းလိုက်မခိုးသည့်) အများနည်းတူ မိုးခါးရေမသောက်သည့် အချို့သူများကိုတော့ ငှက်ရိုးလေးစားသည်။ဒီနေ့မမဝယ်နေကျ ဈေးသည်တို့လိုမျိုး လူများဖြစ်သည်။
ချီးကျူးလိုစိတ်က ထိန်းမနိုင်စွာဖြင့် နှုတ်မှစကားလုံးအချို့ထွက်ကျလာသည်။
“မမရယ် မမဝယ်နေကျဈေးသည်တွေကိုတော့ ကျွန်တော်လေးစားတယ်ဗျာ။”
“ဟဲ့ ဆိုင်းမဆင့်ဗုံမဆင့် ဘာထဖြစ်တာလဲဟ”
“သြော် မဟုတ်ပါဘူး။မမဝယ်နေကျ ဈေးသည်တွေလိုမျိုး သူများခိုးတိုင်း လိုက်မခိုးကြတဲ့ သူတွေကို ကြည်ညိုလို့ပါ။”
သူမရယ်တာကအခြားမိန်းကလေးများလို ခိုးခိုးခစ်ခစ်မဟုတ်။ပါးစပ်ကြီးဖွင့်ကာ ဖွင့်ကာနှင့် အားရပါးရရယ်ခြင်းဖြစ်၏။ဝါးလုံးကွဲရယ်သံဆိုတာ သူမှအစစ်။
ခုလဲ သူမရယ်သံက ဘယ်လောက်အထိ ကျယ်သွားလဲတော့မသိ။ မျက်နှာချင်းဆိုင်က စောင်းငန်းစောင်းငန်းနှင့်လျှောက်လာသည့် ခွေးဝဲစားတစ်ကောင်ကိန်ခနဲအော်ကာလှည့်ပြေးသွားသည်။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က သီချင်းသံကို သူမရယ်သံကလွှမ်းသွားသည်။ ရေဒီယိုမိန့်ခွန်းထက် ပိုမိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းသည့် ငှက်ဆိုးထိုးသံကြီးကိုကြားလိုက်ရသဖြင့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အတွင်းမှ ခေါင်းများက လမ်းမဖက်သို့ မတိုင်ပင်ပဲပြိုင်တူလှည့်လာကြသည်။
အကြော်ဆိုင်ထဲမှလူများကတော့ သူတို့ဆိုင်ထဲ လက်နက်ကြီးကျသည်ဟု အောက်မေ့၍ လားမသိ မြောင်းဘေးနားတွင်ဝပ်နေကြသည်။
ဘတ်စ်ကားတစ်စီးက သူတို့ကားကို မော်တော်ပီကယ်ဖမ်းသည်ထင်၍ ကျွီခနဲရပ်လိုက်၏။ အနီးရှိမော်တော်ပီကယ်ကတော့ သူ့ခရာကို ပါးစပ်ထဲထည့်ကာ တပြွတ်ပြွတ်နှင့်စုပ်နေပြီး လက် နှစ်ဖက်ကလည်း သူ့ခေါင်းမှဆံပင်များကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်ဆွဲနှုတ်နေသည်။
ဤသို့ကမ္ဘာပျက်မတတ် ဝရုန်းသုန်းကားဖြစ်အောင် အားရပါးရရယ်ပြီးမှပင် မမခမျာ ကျွန်တော့်ကို စကားပြန်ပြောသည်။
“ဟဲ့…ငါဝယ်တဲ့ဈေးသည်တွေကရော မခိုးဘူးလို့ဘယ်သူပြောလဲ။တစ်ဈေးလုံးထက်စာရင် သူတို့ကသိပ်မခိုးလို့ ငါဝယ်တာဟဲ့။”
မှန်၏။ခေတ်ကိုကပင် မခိုးတတ်က လူရာမဝင်သောခေတ်ဖြစ်၏။ထို့ကြောင့် ငှက်ရိုးလည်း လူတောတိုးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမည်။ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအဖြစ် ယခုဈေးစာရင်းကို အိမ်တွင်စာရင်းလိမ်ရန် ငှက်ရိုးကြံထားသည်။
အစကောင်းလျှင် အနှောင်းသေချာသည်။စံချိန်စံညွှန်းမှီမှီခိုးတတ်သွားလျှင် ငှက်ရိုးလည်း တစ်နေ့တော့ ဝန်ကြီးဖြစ်လာနိုင်သည်။
This entry was posted in ဟာသ on January 1, 2015 by linyeikhtin.
နေခြည်က ဖျော့တော့တော့နှင့် ရွှေရောင်သမ်းနေသည်။ ဆောင်းရာသီမို့ မြူအချို့ဆိုင်း နေသော်လည်း သိပ်မကြာခင် နေပူလာတော့မည်။
လူကုံထံရပ်ကွက်နားက ဈေးဖြစ်သဖြင့် ဒီအချိန်ဆိုလူကျဲသည်။ ဈေးသည်များကတော့ ဝယ်သူရှိရှိ၊မရှိရှိ သူတို့ကုန်များအရောင်းထွက်ရန် အပြိုင်အဆိုင်ဈေးခေါ်နေကြသည်။
ကျွန်တော်ကဆန်းသည်။ယောက်ျားလေးတန်မဲ့ ငယ်ငယ်လေးတည်းက ဟင်းချက်ရတာ ကို နှစ်သက်သည်။တခြားသူများက စစ်တိုက်တမ်းကစားနေချိန်တွင်၊ကျွန်တော်က ထမင်းချက်တမ်း ကစားသည်။စစ်တိုက်တန်းကိုတော့ ရံဖန်ရံခါမှပင် ကစားသည်။
၁၀တန်းအောင်ပြီးနောက်တွင်တော့ တစ်ပတ်ကိုတစ်ရက်ဟင်းချက်သည်။၄တန်းလောက် ကတည်းက ဟင်းဘယ်လိုချက်ရမည်ဆိုတာကို လေ့လာထားသဖြင့် အသားကိုင်၊ငါးကိုင်ရတာက အမှု ထားစရာမလိုတော့…။
ပုံမှန်ဆို ကျွန်တော်ကဈေးသွားလေ့သွားထမရှိ…။ကျွန်တော်ချက်မည့်ဟင်းအမယ်အတွက် လိုတာတွေကို စာရင်းလုပ်ထားလိုက်သည်။ဒီစာရင်းအတိုင်း မမနှင့်အိမ်ကကောင်မလေးတစ်ယောက် က သွားဝယ်သည်။
ဒီနေ့တော့ မမနှင့်ဈေးသွားနေကျကောင်မလေးက ဖျားနေသည်။ကျန်သူများကလည်း အလေးအပင် သိပ်မနိုင်သူများမဟုတ်…။ဆိုတော့…။ဈေးခြင်းတောင်းဝိုင်းဆွဲရန် မမကကျွန်တော့်ကို ဈေးခေါ်သွားသည်။
အဲဒီမှာပြဿနာကစသည်။ရှုပ်ရှက်ခတ်နေသော လူအုပ်ကြီးကိုကြည့်ရင်း ခေါင်းတွေမူးနေ သည်။ထိုအကြောင်း မမကိုပြောတော့ မမကပြန်ပြောသည်။”ဒီအချိန်က လူအရှင်းဆုံး”တဲ့။
နောက်တော့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည်။ဒီအထိရောက်လာခဲ့ပြီးမှတော့ လှည့်ပြန်လို့လဲ ရမည်မထင်။ဘာမှမထူးမည့်အတူတူတော့ ကိုယ့်နားထင်ကိုယ်ပွတ်ရင်း ဝယ်စရာရှိတာတွေ ခပ်သုတ် သုတ် ဝယ်ပြီးပြန်ဖို့ စိတ်ကူးလိုက်သည်။
“မမ ဟိုမှာ ကြက်သားသည်တွေ့ပြီ။ကျွန်တော်တို့ ကြက်သားဝယ်ရမယ်လေ။”
“အာ…အဲဒီအသည်ကရေထိုးတယ်ဟ။ဗမာကြက်ထဲမှာ အဲဒီလောက်ကြီးတဲ့ကြက် နင်တွေ့ ဖူးလို့လား။”
ဟုတ်တော့ ဟုတ်လောက်သည်။ဗမာကြက်ရယ်လို့ အော်ရောင်းနေပေမယ့် အကောင်က အတော်ကြီးသည်။နောက်ပြီး အသားကလည်း ဖြူဖြူဖျော့ဖျော့၊ပွစိပွယောင်းကြီး…။
ထို့နောက် နောက်ထပ်တစ်သည်ထပ်တွေ့သည်။ပထမတစ်ခေါက်ကလို ခံရမည်စိုးသဖြင့် ကြက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်။စစ်လောက်သည်။ပွစိစိဖြစ်မနေ။အကောင်လည်းသေးသည်။
“မမ ဟိုမှာတစ်သည်…။ဒီတစ်ခါတော့ စစ်လောက်တယ်။”
“အဲဒီအသည်ကျတော့ အလေးခိုးတယ်ဟ။ဒီမှာနားထောင်မောင်လေး အသားငါးဝယ်ပြီဆို ချိန်ခွင်ကိုလက်နဲ့ကိုင်ထားတဲ့ အသည်ဆီမှာ ဘယ်တော့မှမဝယ်နဲ့။ချိန်ခွင်လျှာကို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ဖက် ထွက်နေအောင် လက်နဲ့လုပ်လို့ရတယ်။”
ကျွန်တော် မျက်စိနည်းနည်းလည်သွားသည်။တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် ချိန်ခွင်ကိုဒီလိုလုပ်လို့ ရသည်ဟု ပထမဆုံးကြားဖူးလိုက်၍ဖြစ်သည်။
သို့နှင့်တတိယတစ်ဆိုင်…။အသားကလတ်သည်။ရေမထိုးလောက်။ချိန်ခွင်ကိုကြည့်သည် လက်နဲ့ကိုင်မထား။ဆိုင်ခေါင်မိုးပေါ်က ကြိုးတစ်ချောင်းချထားပြီး ထိုကြိုးတွင်ချိန်ခွင်ချိတ်ထားသည်။
အဆင်ပြေပြီ……။မမကို လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်သည်။ မမလည်း လေ့လာနေပုံရသည်။ နောက်တော့ ဆိုင်ထဲသို့ဝင်လိုက်သည်။
တော်သေး၏။မမဝယ်နေကျဆိုင်အထိ သွားဝယ်ရလျှင် အတော်လမ်းလျှောက်ရဦးမည်။ မမ ဝယ်နေကျဆိုင်က ဟိုး…အတွင်းပိုင်းမှာရှိသည်ကိုး။
ကျွန်တော်ပျော်သွားသည်။ ဈေးတောင်မေးနေပြီဆိုတော့ ဝယ်ဖြစ်ဖို့ကသေချာသလောက် ရှိနေပြီ။
သို့သော် ကျွန်တော့်အပျော်တို့က သိပ်မကြာလိုက်။မမက ကျွန်တော့်ကိုမျက်ရိပ်ပြသည်။ သဘောက”သွားကြစို့”ဆိုသည့်သဘော။
ထိုဆိုင်နှင့် ခပ်လှမ်းလှမ်းရောက်တော့မှ မမကိုကျွန်တော်မေးသည်။
“မမရာ ဒီတစ်ခေါက်ကျတော့ ဘာထပ်ဖြစ်ရပြန်တာလဲ။”
“ဒီတစ်ခါကျတော့ ချိန်ခွင်မှာပြဿနာမရှိဘူး။အလေးမှာရှိတာ။သူသုံးတဲ့အလေးကို သတိ ထားပြီးကြည့် ပါးလွှာနေတာပဲ။”
မမက စိတ်ရှည်လက်ရှည်ရှင်းပြသည်။ကျွန်တော်ကတော့ ခိုးနည်းအမျိုးမျိုးကို မကြားစဖူး ကြားနေရသည်။
နောက်ဆုံးတော့ ဝေးပါသည်ဆိုသည့် မမဝယ်နေကျဆိုင်မှာပဲ ကြက်သားဝယ်ဖြစ်သည်။ အခြားလိုအပ်သည့် အသား၊ငါးများကိုလည်း ထိုနားတစ်ဝိုက်မှာပင်ဝယ်သည်။
ထို့နောက် ကျွန်တော်စိတ်ကူးထားသည့် ကန်စွန်းရွက်ဝယ်ရန် အသီးအရွက်တန်းဆီသို့ ခြေဦးလှည့်လိုက်သည်။
မမကသူဝယ်နေကျဆိုင်မို့ ဈေးမေးမနေတော့။ကျွန်တော်လည်း ကျသင့်ငွေကိုပေးချေပြီး ဆိုင်ထဲမှပြန်ထွက်မည်အလုပ်…………။
“မောင်လေး ဟိုဖက်ဆိုင်ကိုကြည့်လိုက်စမ်း။ဆိုင်ရှင်ကအရွက်တွေကို ရေစွတ်ပေးနေတာ တွေ့လား။”
တိုးတိုး တိုးတိုးနှင့် ကျွန်တော့်နားကပ်ပြီးလာပြောသည်။
“အေး…အဲဒါ ဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတာ ပြီးရင်ပြောမယ်။”
ပထမတုန်းကအတိုင်း တိုးတိုးလေးပြောပြီး ရှေ့မှဦးဆောင်ကာထွက်သွားသည်။ထိုဆိုင်နှင့် ခပ်လှမ်းလှမ်းရောက်မှပြောသည်။
“ခုနတုန်းက အသီးအရွက်တွေကို အဝတ်စတစ်ခုနဲ့ ရေစွတ်ပေးနေတာတွေ့ခဲ့တယ်နော် မောင်လေး။”
“အေး အဲဒီရေတွေက ရိုးရိုးရေတွေဖြစ်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်နည်းတယ်။”
“ဘယ်လို မမ ရိုးရိုးရေမဟုတ်ရင် အဲဒါဘာရေတွေလဲ။”
“ဒီလိုဟ။အရွက်တွေဆိုတာက အချိန်ကြာသွားရင် နွမ်းသွားရော။ဥပမာ ကန်စွန်းရွက်ပေါ့။ ဒီလိုအခါမျိုးကျရင် ပြန်လန်းလာအောင်လုပ်ဖို့ နည်းတစ်နည်းရှိတယ်။”
“ဓာတ်မြေသြဇာတစ်ခုရှိတယ်။အဲဒါကိုရေနဲ့ဖျော်။ပြီးရင်အဝတ်တစ်ထည်ကို အဲဒီရေထဲနှစ်။ ရေညှစ်။ နောက်ဆုံးအဆင့်က ကိုယ်လန်းစေချင်တဲ့ အရွက်ပေါ်ကို အဲဒီအဝတ်အုပ်ပြီးတစ်ညသိပ်။ မနက်လင်းရင် နင့်အရွက်တွေပြန်လန်းပြီ။”
“ဟာ ကောင်းလှချည်လားမမရဲ့။ဒါဆို ခုနစွတ်နေတဲ့ရေတွေက…………။”
“သြော်…အဲဒါကြောင့်မို့ မမက ရိုးရိုးရေတွေ မဟုတ်လောက်ဘူးလို့ ပြောတာကိုး…။”
ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သဘောပေါက်သွားရသည်။ဒါကလည်း ခိုးနည်း တစ်မျိုးဟု ပြောမယ်ဆိုပြော၍ရသည်။
ဘာပဲပြောပြော။ဝယ်စရာရှိတာ အားလုံးဝယ်ပြီးသွားသဖြင့် လူကအတော့ကိုလွတ်လပ် သွားသည်။
“အေးပါ ပြန်ကြမယ်။ဒါပေမယ့် ငါဗိုက်ဆာနေပြီ။နင်ရော ဗိုက်မဆာဘူးလား။
မမ ပြောမှသတိရသည်။နာရီကိုပြန်ကြည့်မိတော့ ၉နာရီထိုးဖို့၁၅မိနစ်။
အစတုန်းကတော့ ကိုယ့်အပူနှင့်ကိုယ်မို့မသိသာ။ခုမှသာ ဗိုက်ထဲမှ ပိုးမျိုး၈၀က ထကြွ သောင်းကျန်းလာကြသည်။
မုန့်ဟင်းခါးသံ ကြားလိုက်ရ၍ နဂိုဆာနေသောဗိုက်က ပို၍ဆာလာသည်။ဟန်ဆောင်၍မရ တော့။
မုန့်ဟင်းခါးကကောင်းလွန်းလှသည်။ဘယ်လိုကဘယ်လို တစ်ပွဲကုန်သွားမှန်းမသိ။ပုံမှန်ဆို မုန့်ဟင်းခါးတစ်ပွဲစာသာဆံ့သောဗိုက်က ယခုတော့ လိုက်ပွဲနှစ်ပွဲထပ်တောင်းရသည်အထိပင်။
ဗိုက်ဝသွားတော့ခေါင်းကပြန်ကြည်လာသည်။မမကတော့ မိန်းကလေးသဘာဝ အိနြေ္ဒရရ စားနေသဖြင့် ခုချိန်ထိ တစ်ပွဲတောင်မကုန်သေး။
ဗိုက်ဝသွားတော့မှ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုစိုက်မိသည်။မလှမ်းမကမ်းမှာလည်း မုန့်ဟင်းခါးဆိုင် တစ်ဆိုင်ရှိသည်။ဒီဆိုင်ထက်တောင် လူပိုစည်သေးသည်။တချို့ဆို ထိုင်စရာမရှိသဖြင့် မတ်တပ်အနေ အထားနှင့် စားနေရသည်။
ကျွန်တော်တို့နှင့် မလှမ်းမကမ်းရှိ ဝိုင်းတစ်ခုမှ ဟင်းရည်အဆစ်တောင်းသံ ကြားလိုက်ရ သည်။
အဆစ်တောင်းသူကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ အသက်၄၀အရွယ် အန်တီကြီးတစ်ယောက်။ ကျွန်တော်စိတ်ပျက်ပျက်နှင့် ခေါင်းယမ်းမိသည်။
“ဟဲ့ ဘာတွေ ခေါင်းခါနေတာလဲ။”
“အောင်မလေးဟဲ့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်။လုပ်စမ်းပါဦး ဘာလို့ ခေါင်းယမ်းတာလဲ။”
“ဟိုဖက်ဝိုင်းကအန်တီကြီး ဟင်းရည်အဆစ်တောင်းတာ မမကြားတယ်မဟုတ်လား။မဝရင် ထပ်ဝယ်စားပေါ့။အဲဒီလိုမျိုး အဆစ်တောင်းတာက ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဈေးသည်ဆီကပစ္စည်းကိုခိုးတာ လို့တောင် ပြောလို့ရတယ်။”
“မေးမယ့်သာမေးတာပါ။နင်ဘာကြောင့် ခေါင်းခါတယ်ဆိုတာ ငါရိပ်မိပါတယ်။”
မမက ပြုံးရင်းပြောသည်။ထို့နောက် သူမကပင်ဆက်၍
“ဟုတ်တယ်ဟ။လူတွေကလဲ လူတွေပဲ။အဲဒီလို အဆစ်တောင်းတော့ ဈေးသည်တွေက လည်း အပြည့်ထည့်ပေးရမယ့်အစား လျှော့ပြီးထည့်ပေးကြတာပေါ့။ဒီလိုလျှော့လေ၊အဆစ်တောင်းလေ အဆစ်တောင်းလေ၊လျှော့လေနဲ့ သံသရာကလည်နေတာ။”
“ဈေးသည်တွေခိုးတတ်အောင်ပဲ လူတွေရဲ့ အပြုအမူတွေက မြောက်ထိုးပင့်ကော် လုပ်နေ သလိုဖြစ်နေပြီ မမရဲ့”
“ကဲ ကဲ ကိုယ်တော်။ထတော့။ဟင်းချက်ရဦးမယ်။အချိန်က တော်တော်တောင်နောက်ကျ နေပြီ”
မမက စကားစကိုဖြတ်သည်။ထို့နောက် ကျသင့်ငွေကိုရှင်းကာ ဆိုင်ထဲမှထွက်လာခဲ့သည်။
မနက်၉နာရီထိုးနေက အတော်ကိုပူသည်။ ဈေးထဲမှာကလည်း ထီးဆောင်း၍မရသဖြင့် မဆောင်းခဲ့။လမ်းကလည်းတောက်လျှောက်ကိုလျှောက်နေရသဖြင့် ကျောကုန်းတစ်ဝိုက်တွင် ချွေးတို့က ရွှဲရွှဲစိုနေသည်။
အိမ်နှင့်ဈေးကသိပ်မဝေးသဖြင့်သာတော်တော့သည်။ထို့ပြင် သစ်ပင်ရိပ်လေးများကလည်း ရှိနေသဖြင့် နေရောင်ကသိပ်မကျ။
“ဟုတ် ကောင်းတယ်မမ။သြော် ဒါနဲ့ မုန့်ဟင်းခါးဆိုမှသတိရတယ်။ကျွန်တော်တို့ စားတဲ့ ဆိုင်ရဲ့ ဟိုဖက်မှာလည်း မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်တစ်ဆိုင်တွေ့တယ်နော်။”
မမ စကားကြောင့် မမကိုပြန်မေးမိသည်။
“သြော်…နင်မှမသိပဲ။အဲဒီဆိုင်က မုန့်ဟင်းခါးထဲကို ငါးတင်မကဘူး အမဲရိုးတွေပါ ထည့်ပြီး ပြုတ်တာဟ။အဲဒီတော့ အရသာပိုရှိတာပေါ့။”
“ဘယ်လို မမ။အမဲရိုးတွေ ဟုတ်လား”
“ဟုတ်ပါ့ရှင်။နောက်ပြီး အမဲအညှီနံ့မပေါ်အောင် စပါးလင်နိုင်နိုင်ထည့်၊ဆီနာနာသတ်တဲ့ အတွက် ပိုမွှေးပါသတဲ့ရှင်။ကဲ ဘာသိချင်သေးသတုန်း”
မမစကားကြောင့် ကျွန်တော်ငိုင်သွားမိသည်။ပေးလိုက်ရသည့် တန်ဖိုးနှင့်မမျှအောင်ကို ကုန်ပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေးတို့က လျော့လွန်းမကလျော့နေကြ၏။အရည်အသွေး မလျော့တော့ အခြင်အတွယ်တွေက လျော့ပြန်သည်။
“ဒီနေ့တစ်နေ့လုံး ဈေးလိုက်ခဲ့ရတာ ကြားရသမျှတော့ အထူးအဆန်းတွေပဲမမရယ်။ တန်ရာတန်ကြေးပေးပြီး ဝယ်တယ်ဆိုတာထက်စာရင် မတန်ရာမတန်ကြေးပေးပြီးဝယ်တယ်လို့တောင် ပြင်ပြောရမယ့်ပုံပေါက်နေပြီ”
ကျွန်တော့်ကိုပြောပြီး သူ့စကားသူသဘောကျ၍လားမသိ။တစ်ယောက်တည်း ရယ်နေ၏။
“ဒါပေမယ့် မမဝယ်နေကျဆိုင်တွေလိုမျိုး အခြင်အတွယ်လည်းမှန်၊အရည်အသွေးလည်းမှီ၊ ဈေးလည်းမကြီးတဲ့ဆိုင်မျိုးတွေ ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ တော်ပါသေးတယ်လေ”
ပြန်မဖြေ။ပါးစပ်ကို လက်ဝါးနှင့်အုပ်ရင်း တသိမ့်သိမ့်ရယ်နေသည်။
“ငါဝယ်နေကျဆိုင်တွေကရော အလေးပြည့်ပါတယ်လို့ ဘယ်သူပြောလဲ။ဒီတစ်ဈေးလုံးနဲ့ စာရင် သူတို့ကအလေးသိပ်မခိုးလို့ငါဝယ်တာ။နင်မယုံရင် ချိန်ခွင်တစ်လက်နဲ့ သမာဓိအလေးတွေယူပြီး ကိုယ်တိုင်ချိန်ကြည့်။အနည်းနဲ့အများတော့ လျော့တာချည်းပဲ”
မမ စကားအဆုံးမှာတော့ ကျွန်တော်ပြန်ငိုင်ကျသွားသည်။လက်ထဲက ဈေးခြင်းတောင်း တောင် ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်ဖြစ်သွားသယောင်……………။
This entry was posted in အတွေးစာစုများ(ရသ) on January 1, 2015 by linyeikhtin.